Liiska oo dhameystiran SQL Server Khaladaadka Faylka MDF iyo Dhibaatooyinka
Bogga ugu weyn Products DataNumen SQL Recovery Liiska Khaladaadka oo Dhameystiran
SQL Server Khaladaadka iyo Dhibaatooyinka
Liiska oo Dhamaystiran Khaladaadka iyo Dhibaatooyinka ku jira SQL Server Faylasha Macluumaadka MDF
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,501 cod)
Markaad isticmaasho Microsoft SQL Server si aad ugu lifaaqdo ama u hesho faylka kaydinta xogta MDF ee musuqmaasuqa ah, waxaad arki doontaa farriimo qalad kala duwan, oo laga yaabo inay kugu yara wareersan yihiin. Sidaa darteed, halkan waxaan isku dayi doonnaa inaan soo taxno dhammaan khaladaadka suurtagalka ah, oo loo kala sooco iyadoo loo eegayo inta jeer ee ay dhacaan. Khalad kasta, waxaan ku sharixi doonnaa astaamihiisa, sharxi doonaa sababtiisa saxda ah waxaanna siin doonnaa feylasha muunadda iyo sidoo kale feylka naloo hagaajiyey DataNumen SQL Recovery, si aad si fiican u fahmi karto. Hoos waxaan ku isticmaali doonaa 'xxx.MDF' si aan u muujino musuqmaasuqaaga SQL Server Magaca faylka MDF.
Iyada oo ku saleysan SQL Server ama farriimaha qaladka CHECKDB, waxaa jira saddex nooc oo khaladaad ah oo keeni kara guuldarro:
Khaladaadka qoondaynta Waan ognahay xogta ku jirta faylasha MDF & NDF in loo qoondeeyay sida pages. Waxaana jira bogag gaar ah oo loo adeegsado maaraynta qoondaynta, sida soo socota:
Nooca Bogga Description
GAM Bogga Ku keydi khariidadda qoondaynta adduunka (GAM) info.
Bogga SGAM Kaydso macluumaadka khariidada qoondaynta adduunka (SGAM) ee la wadaago.
IAM Bog Kaydinta tusmada qoondaynta tusmada (IAM).
Bogga PFS Kaydi macluumaadka qoondaynta PFS.
Haddii mid ka mid ah bogagga qoondaynta ee kor ku xusan ay khaladaad leeyihiin, ama xogta ay maamusho bogaggan qoondayntu aysan waafaqsanayn macluumaadka qoondaynta, markaa SQL Server ama CHECKDB ayaa soo sheegi doonta khaladaadka qoondaynta.
Khaladaadka iswaafaqsan: Waayo, pages loo isticmaalo in lagu kaydiyo xogta, oo ay ku jiraan bogagga xogta iyo bogagga tusmada, haddii SQL Server ama CHECKDB ka hel wixii iswaafaqla'aan ah ee u dhexeeya bogga waxyaabaha ku jira iyo jeegagga, ka dib way soo sheegi doonaan khaladaadka joogtada ah.
Dhamaan khaladaadka kale: Waxaa jiri kara khaladaad kale oo aan ku dhici doonin labada qaybood ee kor ku xusan.
xxxx.mdf ma aha faylka keydka aasaasiga ah. (Microsoft SQL Server, Khalad: 5171)
Madaxa cinwaanka faylka 'xxxx.mdf' maahan cinwaan fayl diiwaangashan oo sax ah. Hantida FILE SIZE waa khalad. （Microsoft SQL Server, Khalad: 5172）
SQL Server ogaadey qalad I / O ah oo iswaafaqsan oo macquul ah: jeeg aan sax ahayn
SQL Server ogaadey qalad I / O ah oo iswaafaqsan oo macquul ah: bogga la jeexjeexay
Waad tirtirtaa qaar ka mid ah diiwaanada ama miisaska qaar ee keydka xogta si khalad ah.
SQL Server wuxuu leeyahay qalab la dhisay oo la yiraahdo DBCC, taas oo leh Hubinta iyo HALKAN Ikhtiyaarrada kaa caawin kara hagaajinta kaydinta xogta MDF ee musuqmaasuqa ah. Si kastaba ha noqotee, faylasha keydka xogta MDB ee waxyeellada daran, DBCC CHECKDB iyo HALKAN sidoo kale wuu fashilmi doonaa.
Khaladaadka iswaafaqsan ee uu soo wariyay CHECKDB:
Safka sys.xxx kuma laha saf isku mid ah sys.xxx.
Jadwalka miiska: Shayga Aqoonsiga ##, tusmada aqoonsiga ## dib ayaa loo dhisi doonaa.
Tusmada miiska nidaamkan dib looma abuuri karo.
Aqoonsiga Shayga ##, Aqoonsiga Aqoonsiga ##, Qaybta Aqoonsiga ##, u qoondeynta unugga Aqoonsiga ## (nooca aan la aqoon), Aqoonsiga bogga (##: 560) waxaa ku jira aqoonsi bog aan sax ahayn oo ku jira cinwaanka bogga.
Khaladaadka qoondaynta waxaa soo sheegay CHECKDB:
Khariidadda Qoondeynta Index (IAM) Bogga waxaa tilmaamaya tilmaameha xiga ee Bogga IAM
Xaddiga (##: ##) keydka xogta Aqoonsiga ## waxaa lagu calaamadeeyay GAM, laakiin ma jiro SGAM ama IAM u qoondeeyay.
Dhammaan khaladaadka kale waxaa soo sheegay CHECKDB:
Ku guuldareystay: (- #######).
I / O qalad (aqoonsi bogga xun) oo lagu ogaadey inta lagu gudajiro akhriska 0x ###### ee feylka 'xxxx.mdf'.
Nidaamku Ma Kicin Karo Xog Ku filan Database-ka Si Dib Loogu Dhiso Diiwaanka
Khasaaraha Xogta Marka Lagu Dayactirayo CHECKDB
Faylka wuxuu umuuqdaa inuu jaray nidaamka qalliinka.
Intii lagu guda jiray dib u habeynta hawlgal duuban ee 'xxxx', qalad ayaa ka dhacay diiwaanka diiwaanka.